Mijirika Indray Ny Tafika (Ny Azy Ihany) i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2015 8:15 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, русский, polski, Español, English
Mbola mamely indray ny Anonymous International, vondrona Rosiana mpijirika izay nisafidy an'i Humpty Dumpty ho toy ny “mascot” famantarana azy—tamin'ity indray mitoraka ity, ny Minisiteran'ny Fiarovana. Sary nafangaro nataon'i Tetyana Lokot.
Miaraka amin'ilay vaovao mbola resabe iahiahian'i Etazonia an’i Rosia ho mijirika ny rafitra mailaka ao amin’ny Pentagaona, toa toy ny maneso fa ny Minisiteran’ny Fiarovana any Rosia koa tahàka ny manana olana mitovy amin'izany amin'ny fiarovana ny torohay. Na izany aza, namoaka tahirin-kevitra ofisialy ireo Rosiana mpijirika miafina “Anonymous International” ka nilazàny fa hovakiany bantsilana ny fomba ratsy fanao amin’ny tsy fahampian’ny fiarovana ny torohay eo anivon'ny minisiteran'ny governemanta.
Ny Zoma 7 Aogositra, namoaka taratasy misokatra ilay vondrona fantatra amin'ny fijirihana tsy tapaka sy ny fanaporitsahana ny fampitam-baovaon’ny fanjakana sy ao amin’ny governemanta, nilazàny fa nifandefa tahirin-kevitra saropady tamin’ny mailaka nandritra ny efa-taona lasa ireo manampahefana ao amin’ny Minisiteran’ny Fiarovana Rosiana, tamin’ny alalan’ny tolotra mailaka maimaim-poana.
Navantana tamin’i Aleksandr Bezverkhny , avy amin’ny depatemanta miady amin’ny fitsikilovana ao amin'ny FSB, sampan-draharahan’ny fiarovam-panjakana Rosiana ary mpandimby ny KGB ankehitriny, ilay taratasy misokatra. Araka ny antsipirihany ao amin'ilay taratasy misokatra, toy ny “heloka bevava fanaovana antsirambina” no fahitàn'ny Anonymous International ny “tsy fahaizana” ao amin'ny Ministeran'ny Fiarovana Rosiana .
Nampita tahirin-kevitra ofisialy tsy voaro izy ireo, tamin'ny alalan'ny sampan-draharaha maimaim-poana misahana ny mailaka, toy ny yandex.ru, mail.ru, ary ny gmail.com amerikana, matetika ahitàna torohay miafina mifandray amin'ny fiarovana ny Federasiona Rosiana. Indrindra, nampiasain'izy ireo io fomba io ho fampitàna tahirin-kevitra izay mifandray amin'ny tatitra sy ny torohay noresahana nandritry ny fivoriana niarahana tamin‘ny Minisitry ny Fiarovana sy ny lefiny. Mora azon’ny ankamaroan'ny olona liana ny torohay izay nandalo tamin'ny fantson’ny mailaka tsy misy fiarovana, azon’ny rehetra jerena.
Ankoatra ilay taratasy misokatra, namoaka ny porofon’ny ahiahiny ny Anonymous International (fantatra koa amin'ny hoe Shaltai Boltai [Rosiana ho an’ny Humpty Dumpty]), tamin'ny alalan'ny fanomezana tahirin-kevitra an-tsoratra manazava amin'ny antsipirihany mikasika ny fanapariahana ny balafomanga Iskander sy ny sambo mpisitrika noklearin’ny Tafika an-dranomasina ao Pasifika.
Na izany aza, tsy mpikatroka ara-moraly mikatsaka ny hanatsàrana ny fiarovana ny torohain’ny Minisiteran’ny ny Fiarovana fotsiny akory ny Anonymous International. Ezahan'ilay vondrona ny hivarotra ny ampahany amin'ny torohay nosamborina avy amin’ny Minisiteran’ny Fiarovana tao amin’ny joker.buzz, tranonkala iray izay mamela ireo mpampiasa azy hanao lavanty ny torohay nangalarina na saropady. Araka ny lisitry ny lavanty, ahitana ny fifampizaràna mailaka nandritry ny efatra taona niaraka tamin'ny mpanampy an’i Roman Filimonov, manampahefana ao amin'ny Minisiteran'ny Fiarovana ary ny vontoatin’ny iPhone sy ny iPad-n’ilay mpanampy, ny torohay (350 BitCoins ny vidiny ambany, efa manakaiky ny $100.000 ny vidiny amin'izao fotoana izao). Na izany aza, nanolotra fihenam-bidy 50 isan-jato amin’ny vidiny ny vondrona, ho an'ireo Rosiana manampahefana miady amin’ny fitsikilovana, “raha toa izy ireo afaka manaporofo ny maha-izy azy.”
Tamin’ny fomba tsy nampoizina, nanome valinteny ofisialy tamin’ny fanambarana mikasika ny fiporitsahana amin’ny Anonymous International i Dmitry Peskov, sekreteran’ny fampitam-baovaon'ny Filoha Putin (sy tompon'ny famataranandro avo lenta). Nilaza i Peskov raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny 7 Aogositra, fa nomena andraikitra ny sampan-draharaha manokana Rosiana mba hanamarina ny maha-azo itokiana ireo tatitra. Niantso ny fampiasàna ilay tolotra fandefasana mailaka maimaim-poana mba hampitàna ny torohay saropadin’ny governemanta ihany koa ho “mihoatra ny adala” ary “tena tsy azo ekena” ilay mpitondra tenin'i Putin. Nampitaina avy hatrany tamin'ny ankamaroan'ny mediam-panjakana Rosiana izany fanambaran’i Peskov izany, anisan'izany ny TASS, ny Interfax, ary ny Rossiyskaya Gazeta.
Nanome fandrakofana malalaka mikasika ny fiporitsahana isan-karazany azo avy amin'i Anonymous International nandritra ny roa taona farany ny RuNet Echo. Toy ny tamin'ny fiporitsahana teo aloha, ny taratasy manetry ny Minisiteran’ny Fiarovana, toa miezaka hanala baràka ny Kremlin, ary koa ireo endrika manokana ao amin'ny governemanta. Na izany aza, tsy manam-paharoa io fiporitsahana io satria nahazo valinteny haingana—sy nalefa betsaka—avy amin'ny Kremlin.
Na maro aza ny mitsikera ny adilahy ao anatin’ny Kremlin sy ny teti-dratsy nitondra nankany amin'ny fiporitsahana ary ny fihetsika manoloana izany, angamba aingam-panahy avy amin’ny tatitra vao haingana nataon’ny mpanafika amin’ny aterineto Rosiana manohitra ny Pentagaona ny valiny haingana avy amin’ny fanjakana Rosiana. Na tsy manimba loatra ny lazan'ny Kremlin aza io fiporitsahana io, manana fahafahana tsara i Rosia hitandro ny voninahiny sy hampiseho fa tena mandray ny fiarovana ny torohay ho zava-dehibe.